ललिता निवास प्रकरण: गच्छदारलाई म्याद बुझ्न ताकेता – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
काठमाडौँ /ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई म्याद बुझाउन विशेष अदालतले ताकेता बढाएको छ ।
विशेष अदालतका रजिस्टार अशोक क्षेत्रीले गच्छदारको म्याद सम्बन्धित अदालतले बुझाएको जानकारी प्राप्त नभएको बत९ाउनुभयो । अदालतले म्याद बुझाउनका लागि जिल्ला अदालतल सुनसरीलाई ताकेता भने गरिरहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । जिल्ला अदालतमार्फत विशेषले म्याद २०७६ फागुन १९ गते नै पठाएको थियो ।
साउनयता क्रमशः अदालत खुल्दै गए पनि म्याद बुझाउन अदालत असमर्थ छ । फागुनको म्यादबारे कुनै जानकारी नआएपछि कात्तिक १८ गते विशेषले पुनः तोकेता गरेको छ । सोपछि पनि जिल्ला अदालतले म्याद तामेल गर्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरीत ! ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
चोरको आँखा पल्सरमा स् काठमाडौँमा दैनिक ४–५ वटा मोटरसाइकल चोरी ! ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
सीमा विवादबारे छलफल गर्न भारत अनिच्छुक ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि ! ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
सरकारसँग वार्ताको तयारी चल्दै गर्दा एकाएक समातिए विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता बास्तोला। ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा झाँकी सहितको पदयात्रा ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
टिम नेपो चितवनले दियो भरतपुर कारागारलाई ८०८ थान पुस्तक। ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
अमेरिकामा आपत् : विश्व जगतले गर्‍यो भत्सर्ना, बाइडेनको जित आधिकारिक ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
भारतमा देखियो बर्ड फ्लू, दक्षिणी नाकामा कडाई ! ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
अख्तियारमा लान चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ? ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे, बस्न्यातलाई थुना। ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७
वैशाखमा चुनाव नभए ओली संकटकाल लगाउने तयारीमा १ ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:३७